Dry Skin on Penile Shaft ယောက်ျားလိင်အင်္ဂါ အရေပြားခြောက်သွေ့ခြင်း
ကျနော်က အသက် ၃၄နှစ် ပါ။ အိမ်ထောင်ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ လိင်အင်္ဂါက မိန်းမနဲ့အတူ အိပ်ပြီးတိုင်း ကွဲတာ ရှတာတွေ ဖြစ်တယ်။ အခုနောက်ပိုင်းမှာ အဲလိုမအိပ်ဘဲနဲ့လည်း ခြောက်ပြီး ကွဲရှတာတွေ ဖြစ်နေပါတယ်။ မဖြစ်အောင် ဘာဆေးသောက်ရမလဲ ဒါမှမဟုတ် ဘာတွေလုပ်သင့်သလဲဆိုတာ လမ်းညွှန်ပေးပါဆရာ။
1. Irritation or Allergy အလာဂျီ (သို့) တခုခုနဲ့မတည့်ခြင်း
တချို့က Latex condom ကွန်ဒွမ်ရာဘာနဲ့မတည့်ဝကပါ။ တချို့က ဆက်ဆံတဲ့အခါအပိုသုံးတဲ့ ချောဆီ၊ ပေါင်ဒါ၊ ထုံဆေး နဲ့မတည့်ကြပါ။ Benzocaine, Benadryl cream, Triple antibiotic ointments တွေဖြစ်တယ်။ မတည့်တာကိုလုံးဝရှေင်ြလိုက်ပါ။ Moisturizer soap ရေဓါတ်ပေးဆပ်ပြာသုံးပါ။ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရင် ရေခပ်နွေးနွေးသုံးပါ။ သဘာဝဆီအသန့်နည်းနည်းလိမ်းပေးထားရင် ခြောက်သွေ့တာကိုတားမယ်။
2. Lubricating Agent ချောဆီနဲ့မတည့်ခြင်း
Moisturizer soap ရေဓါတ်ပေးဆပ်ပြာသုံးပါ။ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရင် ရေခပ်နွေးနွေးသုံးပါ။ သဘာဝဆီအသန့်နည်းနည်းလိမ်းပေးထားရင် ခြောက်သွေ့တာကိုတားမယ်။
3. Psoriasis ဆိုရီယေးဆစ်အနာတမျိုး
ဘာလို့ဖြစ်လာသလည်း တိတိကျကျမပြောနိုင်ပါ။ ရှိနေသူ လိင်မှုပြုရင်အနာကပိုဆိုးလာမယ်။ • Topical corticosteroids စတီရွိုက်ဆေးပါလိမ်းဆေးများသုံးရင် ခံစားနေရတာ၊ မြင်နေရတာတွေသက်သာစေတယ်။ ရောဂါကိုအမြစ်ပြတ်အောင်တော့ လုပ်မပေးနိုင်ပါ။ အသင့်အတင့်သာဆိုးတာအတွက်သုံးတယ်။ ပြင်းအားအမျိုးမျိုးရှိတယ်။ တာရှည်မသုံးသင့်ပါ။ သုံးလိုက် နားလိုက်လုပ်ရတယ်။
• Vitamin D analogues လိမ်းဆေးကနေ မူမမှန်ဆွဲလ်တွေဖြစ်လာမှာကို နှေးစေမယ်။ Calcipotriene (Dovonex) နဲ့ Calcitriol (Rocaltrol) ဆေး။ Anthralin ဆေးက အနာဖေးတွေကိုကွာကျစေမယ်။ Topical retinoids ဆေးတွေ ဥပမာ tazarotene (Tazorac, Avage) ရောင်ရမ်းတာကိုသက်သာစေမယ်။ Calcineurin inhibitors ဆေး ဥပမာ tacrolimus (Prograf) နဲ့ pimecrolimus (Elidel) တွေက ရောင်နေတာကိုသက်သာစေမယ်။ တာရှည်မသုံးသင့်ပါ။ Salicylic acid သေနေတဲ့ဆဲလ်တွေကိုကွာကျစေမယ်။ Coal tar ခြောက်တာ၊ ယားတာ၊ ရောင်တာတွေကို သက်သာစေမယ်။ Moisturizers ဆေးက အစိုဓါတ်ပေးမယ်။ အနေရခက်တာသက်သာစေမယ်။
4. Tinea Cruris ဖန်းဂတ်စ် (မှို) ရောဂါ
Jock itch လို့လည်းခေါ်တယ်။ ကပ်ပယ်အိတ်မှာ အများဆုံးဖြစ်တယ်။ လိင်အင်္ဂါသမက ဘေးနားနေရာတွေမှာလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။
နဲနဲဖြစ်တာအတွက် Antifungal shampo- နဲ့ တနေ့ ၂ ခါ ဆေးကြောပါ။ Ketoconazole (Nizoral shampoo) ဒါမှမဟုတ် Selenium sulfide (Selsun Blue shampoo) သုံးပါ။
အသင့်အတင့်ဆိုးတာအတွက် Antifungal shampo- နဲ့ တနေ့ ၂ ခါဆေးကြောပါ။ Ketoconazole (Nizoral shampoo) ဒါမှမဟုတ် Selenium sulfide (Selsun Blue shampoo) သုံးပါ။ လိမ်းဆေး Miconazole (Monistat, Micatin), Clotrimazole or Terbinafine (Lamisil) တခုခုလိမ်းပါ။
ဆိုးတဲ့ရောဂါအတွက် Antifungal shampo- နဲ့ တနေ့ ၂ ခါဆေးကြောပါ။ Ketoconazole (Nizoral shampoo) ဒါမှမဟုတ် Selenium sulfide (Selsun Blue shampoo) သုံးပါ။ လိမ်းဆေး Miconazole (Monistat, Micatin), Clotrimazole or Terbinafine (Lamisil) တခုခုလိမ်းပါ။ စားဆေး Fluconazole (Diflucan), Itraconazole (Sporanox), or Terbinafine သောက်ပါ။
ယားလဲယား၊ ရောင်လဲရောင်နေရင် Triamcinolone 0.025% တနေ့ ၁-၂ ကြိမ်၊ ၅-၇ ရက် လိမ်းပါ။ ဒါမှမဟုတ် Cortaid တနေ့ ၁-၂ ကြိမ်၊ ၅-၇ ရက် လိမ်းပါ။ Topical immunomodulator = Pimecrolimus (Elidel) cream ဒါမှမဟုတ် Tacrolimus (Protopic) ointment တနေ့ ၂ ကြိမ်လိမ်းပါ။
5. Eczema နှင်းကူနာ
ဆေးတမျိုးတမျိုးပြောင်း သုံးရတတ်တယ်။ Corticosteroid creams လိမ်းဆေးတွေက Inflammatory reaction ရောင်ရမ်းဖြစ်စဉ်ကို သက်သာစေတယ်။ ဒီဆေးမျိုးတွေကလဲ ခပ်ပြော့ပြော့၊ ခပ်လတ်လတ် နဲ့ အပြင်စားတွေ ရှိတယ်။
သိပ်ယားနေရင် (အင်တီဟစ်တမင်း) စားဆေးတွဲပေးရတယ်။ ဥပမာ Diphenhydramine (Benadryl), Hydroxyzine (Atarax, Vistaril) နဲ့ Cyproheptadine တွေ သုံးသင့်တယ်။ ဆိုးတဲ့အနာအတွက် FDA ကအသိအမှတ်ပြုထားတဲ့ဆေး ၂ မျိုးရှိတယ်။ Tacrolimus (Protopic) နဲ့ Pimecrolimus (Elidel) တွေ ဖြစ်ကြတယ်။ ဒီဆေးတွေက ရောဂါပြီးတာကို သက်ရောက်စေတဲ့ ဆေးမျိုး Calcineurin inhibitors အုပ်စုဝင် ဆေးတွေ ဖြစ်တယ်။ ၂ နှစ်အောက် ကလေးတွေတော့ မပေးသင့်ဘူး။ ကြီးတဲ့သူတွေမျာလဲ သတိနဲ့သာသုံးပါ။
6. STDs လိင်ကတဆင့်ကူးစက်ရောဂါ
ဆေးစစ်ပါ။ ရှိရင် ရောဂါအလိုပ် စနစ်တကျကုသပါ။